Codso deeqaha xoogan ee MMSC ee Downtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Codso Deeqaha Xooggan ee Magaalada MMSC
Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri waxay siineysaa deeqo badan oo ay heli karaan ganacsiyada Dutchtown. Deeqahaas waxaa maalgeliyey Maamulka Horumarinta Dhaqaalaha Mareykanka si looga caawiyo ganacsiyada inay ka soo kabtaan waxyeelada cudurka faafa ee COVID-19 isla markaana lagu dhiso dhaqaale maxalli ah oo adkeysi ku leh guud ahaan gobolka Missouri.
Guji si aad u weyn.
Ganacsiyada ku dhex jira UrbanMain degmada (oo qiyaas ahaan ku teedsan Grand, Meramec, iyo Virginia) ayaa dalban kara ilaa laba deeq si looga caawiyo horumarinta ganacsiga, suuqgeynta, howlaha, iyo inbadan. Ururada Dutchtown waxay diyaar u yihiin oo diyaar u yihiin inay ka caawiyaan ganacsiyadayada codsashada deeqahaas.
Nidaamka dalabku waa mid iska fudud oo toosan, iyo tabaruceyaal ka socda DT2 · Downtown Dutchtown diyaar u ah oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan inaad codsato. Waxaan kaa caawin karnaa inaad soo ururiso dukumiintiyada ugu yar ee loo baahan yahay, oo ay weheliso sameynta soo jeedin hal abuur leh oo wax looga qabanayo baahiyaha gaarka ah ee ganacsigaaga.
Waxaa lagaa doonayaa inaad muujiso saameyn kasta oo ganacsigaagu dareemay oo ka dhashay faafida. Tani waxay noqon kartaa luminta dakhliga, baahida loo qabo in shaqada laga joojiyo, ama waxyeelooyin kale oo xun oo ay la kulantay COVID-19.
Dadka qaata deeqaha waa inay soo bandhigaan 5% wadarta qiimaha deeqda. Marka, tusaale ahaan, haddii aad hesho deeq $ 5,000 ah, waxaa lagaa doonayaa inaad maal gasho $ 250 oo lacagtaada ah.
Waa inaad kaqeyb gasho aqoon isweydaarsiga deeqaha ee Abriil 8th, ama waa inaad lashaqeysaa wakiilka bulshada ee kasooqeybgalay-haka walwalin, dhowr mutadawiciin katirsan DT2 ayaa joogay aqoon isweydaarsiga iyo waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan!
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa warqad taageero ah oo ka socota DT2 — waana ku faraxsanahay inaan sidoo kale kaa caawinno arrintaas!
Waan kaa caawin karnaa inaad dalbato
Ma u baahan tahay caawimaad dalbashada deeqaha? Tabaruceyaasha ka socda DT2 waxay joogi doonaan Xarunta Hal-abuurka Xaafadda Sabtida, Maajo 1deeda laga bilaabo 10ka subaxnimo ilaa 3da galabnimo si ay kaaga caawiso inaad ku buuxiso dalabkaaga lacag la’aan. Waxaan sidoo kale kuu diyaarin karnaa waqti kale oo aan kula kulanno si aan u diyaarinno codsigaaga deeqda-kaliya email nate.a.lindsey@gmail.com.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in soo degso xirmada arjiga oo dhammaystiran halkan.
Deeqaha Aad Codsan Karto
Waxaa jira in kabadan toban nooc oo deeqo ah oo ganacsiyada dalban karaan (in kasta oo ganacsi kastaa dalban karo kaliya hal ama laba deeqo). Laakiin marka lagu daro qaybaha hoose, codsadayaasha waxaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay hal-abuurnimo sameeyaan - u sheegaan MMSC waxa ganacsigaagu u baahan yahay, deeqahana waa la heli karaa.
Hoos waxaa ku qoran tusaalooyin yar oo deeqo ah oo ay meheraddaadu tixgelin karto inaad codsato. Mar labaad, xor ayaad u tahay inaad hal-abuur yeelato! Haddii meheraddaadu leedahay baahiyo gaar ah (dhammaantoodna way qabaan), waxaan kaa caawin karnaa inaan u qaabeyno dalabkaaga si loo muujiyo baahiyahaas.
Taakuleynta Ganacsatada Tooska ah ee Tafaariiqda iyo Horumarinta Makhaayadaha
Hel deeqo kaa caawiya inaad xoojiso kala duwanaanta ganacsigaaga qaddar ahaan u dhigma $ 2,260 ilaa $ 6,900. Deeqahaas waxaa loo isticmaali karaa qiimeynta ganacsiga, sameynta qorshe ganacsi, hirgelinta xalalka ganacsiga, aqoonsiga soo saarista maxalliga ah, horumarinta dadaallada koritaanka howlaha iyo isbeddelada, iyo sameynta dallacsiinta ganacsiga.
Hel Qiimeyn Ganacsi
Hayso la-taliyeyaal xirfadlayaal ah inay qiimeeyaan xaaladda meheraddaada oo ay soo jeediyaan talooyin ku saabsan hagaajinta sida dayactirka alaabada, kor u qaadida isbeddellada cusub, ama ka ganacsiga dukaankaaga qaab rafcaan leh. Deeqaha qiimeynta ganacsiga waxaa loo heli karaa $ 2,260, oo u baahan hordhaca 5% ee $ 113.
Dhis Qorshe Ganacsi
Meheraddaadu ma leedahay qorshe ganacsi oo rasmi ah? Ka dalbo caawimaad horumarinta qorshahaaga lataliyeyaal ganacsi oo tababaran. U dejiso khariidad lagu dhisayo meheraddaada si ay dhaqaale ahaan u ahaato mid ammaan ah, oo hawlkar ah, diyaarna u ah koritaanka. Deeqaha qorshooyinka ganacsiga waxaa laga heli karaa $ 2,760 ilaa $ 4,710. 5% maalgashigaaga bilowga ahi wuxuu noqonayaa $ 138 ilaa $ 235.
Hirgelinta Xalalka Ganacsi
Ka dib markay qiimeeyaan baahiyahaaga ganacsi, la-taliyayaashu waxay ku deeqi karaan oo ay hirgelin karaan xalal si wax looga qabto arrimaha sida shaqaalaha, xisaabinta, iyo maalgelinta Deeqaha xalalka ganacsigu waxay u dhexeeyaan $ 2,760 ilaa $ 5,060 waxayna u baahan yihiin ciyaar hore oo ah $ 138 ilaa $ 253.
Aqoonsiga Sourcing Local
Kordhi taageeradaada dhaqaalaha maxalliga ah adoo kahelaya wax soo saarkaaga ganacsiyada kale ee maxalliga ah. Caawinaad ka hel helitaanka agabka agtaada, soo gaabinta silsiladahaaga, iyo ka dhigista meheradaha maxalliga ah. Deeqahaas waxaa laga heli karaa $ 2,260 ilaa $ 5,060, oo u baahan 5% ciyaar u dhiganta $ 113 ilaa $ 253.
Hindisaha Kobaca Hawlgalka iyo Isbeddelka
Ma dooneysaa inaad koraan? La-taliyayaashu waxay kaa caawin doonaan qorsheynta inaad ku darto shaqaalaha, ballaadhiso dukaankaaga, ama aad furto goobo dheeraad ah. Deeqaha hawlgalku waxay u dhexeeyaan $ 2,300 ilaa $ 4,600 waxayna u baahan yihiin ciyaar hore oo ah $ 115 ilaa $ 230.
Abuur qorshe dhiirrigelin ah oo lagu dhisay iibka gaarka ah, dhacdooyinka, iyo inbadan oo kaa caawin doona inaad dhisto saldhig macaamiil oo ballaaran. Deeqaha dallacaadda waxaa laga heli karaa $ 2,300 ilaa $ 6,900. Ciyaar 5% oo bilow ah oo u dhiganta $ 115 ilaa $ 345 ayaa loo baahan doonaa.
U dhis meheraddaada cusub e-commerce si aad u soo jiito macaamiisha laga yaabo in aysan si kale ugu soo bixin albaabkaaga hore. Deeqaha horumarinta websaydhka waxaa lagu heli karaa inta u dhexeysa $ 4,600 ilaa $ 8,000.
Dhis Websaydhkaaga E-Commerce
Miyaad heshay macaamiishaada oo weydiinaya inay wax ka iibsan karaan khadka tooska ah inta lagu jiro aafada, laakiin ma haysatid meel aad u dirtid? Dalbo deeq si aad ugu horumariso degel iyo dukaan internetka ah oo ganacsigaaga ah. Soosaarayaasha xirfadleyda ah ayaa kaa caawin doona inaad dhisto wejiga dukaanka si loo soo jiito macaamiisha laga yaabo inayna u soo booqan karin dukaankaaga shaqsi ahaan. Deeqaha horumarinta websaydhku waxay u dhexeeyaan $ 4,600 ilaa $ 8,000. 5% maalgashiga bilowga ahi wuxuu noqonayaa $ 230 ilaa $ 400.
Qalabka Muhiimka ah ee Dhaqaalaha
Qorshee guusha joogtada ah ee ganacsigaaga deeqaha laga helo $ 4,260 ilaa $ 11,960. Deeqahaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo qorshaha suuqgeynta ganacsiga ama qorshaha dhaxal wareejinta milkiilaha.
Qorshaha Suuq Geynta Shakhsiyeed
U hel qorshe suuqgeyn gaar ah oo loogu talagalay ganacsigaaga oo daboolaya fursado badan oo ballaaran si loo ballaariyo gaadhistaada. Deeqahaan suuq-geynta ah waxaa lagu heli karaa qaddar ahaan $ 9,200 illaa $ 11,960. Ciyaarta ugu horreysa waxay noqon doontaa $ 460 illaa $ 598.
Qorshaha Dhaxgalka Milkiilaha Ganacsi
Haddii aad ka fikirayso inaad hawlgab noqoto, iibiso meheraddaada, ama haddii kale si qurux badan uga baxdo hawlgalkaaga hadda, la-taliyayaashu waxay kaa caawin karaan qorsheynta tallaabooyinka xiga. Deeqaha qorshaha dhaxalku wuxuu u dhexeeyaa $ 4,260 ilaa $ 8,060, oo u baahan 5% ciyaar u dhiganta $ 213 ilaa $ 403.
Adeegyada Horumarinta Ganacsiga Yaryar
Moodooyinka ganacsiga ee tijaabada ah ayaa dhulka uga bixi kara deeqo laga bilaabo $ 2,260 ilaa $ 6,080. Deeqahaas waxaa ka mid ah ka faa'iideysiga farshaxanno farshaxanno iyo moodallo ganacsi oo iskaashi ah oo lagu tijaabiyo kartida suuqa.
Ka Faa'iidaysiga Farsamo yaqaannada
Kordhi waxyaabaha aad ka bixiso ganacsigaaga adigoo la kaashanaya kuwa sameeya maxalliga ah. Abuur xariiq tafaariiqeed cusub oo khaas ah oo leh naqshadeeye maxalli ah ama farshaxan menu gaar ah adigoo iskaashi la yeelanaya beeralayda aagga. Deeqahaas waxaa lagu heli karaa qaddar ahaan $ 2,260 illaa $ 5,060, oo u baahan 5% ciyaar u dhiganta $ 113 ilaa $ 253.
Qaababka Ganacsi ee Iskaashatada
Tijaabi ganacsiyada cusub iyo fikradaha adiga oo iskaashi la sameeya ganacsiyada jira. Deeqahaani waxay u dhexeeyaan $ 4,260 ilaa $ 6,080. Waa inaad bixisaa ciyaarta ugu horeysa oo ah $ 213 ilaa $ 304.
Tababarka Iibka ee Ganacsiga
Ka hel caawimaad kobcinta joogitaankaaga internetka deeqaha u dhexeeya $ 1,800 ilaa $ 8,260. U adeegso deeqaha si aad u horumariso qorshe suuqgeynta warbaahinta bulshada ee ganacsiga, sahamiso tabaha xayeysiinta, kordhinta kaqeybgalka warbaahinta bulshada, kala duwanaanta saldhigga macaamiishaada, iyo ka faa'iideysiga iyo kordhinta iibinta meheradaha internetka.
Qorshaha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga
La-taliyayaasha warbaahinta bulshada ayaa kaa caawin kara inaad gasho noocyo kala duwan oo horumariso qorshe lagu soo jiito laguna beegsado macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira. Waad dalban kartaa deeqaha u dhexeeya $ 4,600 ilaa $ 7,360, oo u baahan 5% u dhigma $ 230 ilaa $ 368.
La-taliyayaashu waxay kaaala hadli doonaan yoolalkaaga ganacsi, ka dibna waxay dejinayaan qorshe xayeysiis ah oo kaa caawinaya inaad gaarto yoolalkaas. Deeqdani waa $ 1,800. Ciyaar $ 90 ayaa loo baahan yahay.
La shaqee lataliyaha warbaahinta bulshada si aad u ballaadhiso gaadhistaada oo aad ula macaamisho macaamiisha cusub iyo kuwa jira. $ 1,800 oo deeq ah ayaa la heli karaa taas oo u baahan doonta 5% oo u dhiganta $ 90.
Kala Dhig Saldhigga Macaamiishaada
Baro sida loo ballaariyo saldhigga macaamiishaada iyadoo la adeegsanayo istaraatiijiyooyin suuqa ku dhisan si loo soo jiito macaamiil cusub. Deeqaha waxay u dhexeeyaan $ 2,300 ilaa $ 5,060, oo u baahan ciyaar bilow ah oo ah $ 115 ilaa $ 253.
Kordhin Iibinta Istaraatiijiyadaha Internetka
Horaa wax uga iibisaa khadka tooska ah? Baro sida looga dhigo kaydkaaga qadka tooska ah mid wax ku ool ah si loo wado iibinta weyn. Deeqdani waxay u dhexeysaa $ 2,600 ilaa $ 8,260. Ciyaar u dhiganta $ 130 ilaa $ 413 ayaa loo baahan yahay.
Muddada codsigu waxay dhammaanaysaa Maajo 7th. Hadaad seegtay kuweena furan saacadaha Xarunta Hal-abuurka Xaafadda Sabtida, Maajo 1-deeda, waxaan wali dejineynaa ballamo si aan kaaga caawino inaad buuxiso dalabkaaga deeq-lacageedka Waxaad kala soo bixi kartaa arjiga halkan.
Filimka hoos Ganacsi. Muuji dhamaan qeybaha. Ganacsi, DT2, Iyo Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Waxaa laga yaabaa 25th, 2021 .
DutchtownSTL.org Ganacsi Codso Deeqaha Xooggan ee Magaalada MMSC